International Hotel Franchise ngosi 2022
86-21） 62898830 ma ọ bụ 54669528 ma ọ bụ 54669578 ma ọ bụ 54669686
Ụlọ Ọrụ Weebụ http://www.chinahfe.cn/Public/resources/download/2019HFE_zhaozhanshu.pdf
Kemgbe 2015, ụlọ ọrụ ụlọ nkwari akụ China abanyela n'ụdị usoro mmepe dị iche iche
Kemgbe afọ 2015, ụlọ ọrụ ndị ụlọ nkwari akụ nke China abanyela na usoro mmepe dị iche iche, site na ijikọ ndị OTA ndị gbara ọkpụrụkpụ na njikọta na nnweta nke nnukwu ndị otu njikwa ụlọ oriri na ọ hotelụ atụ n'ụlọ na mba ofesi, na mmekorita oke ala n'etiti ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Njikọ na nnweta na njikọta nke otu ụlọ oriri na nkwari akụ na-egosi adịghị ike nke ụlọ oriri n'otu n'otu
Njikọ na nnweta na njikọta nke otu ụlọ oriri na nkwari akụ na-egosi adịghị ike nke ụlọ oriri n'otu n'otu. Dika onu ogugu ohuru nke ochichi nke ndi njem nlere anya, enwere ihe banyere ulo oru 650,000 na China, ihe kariri 80% n’ime ha bu ulo oru ndi noro onwe ha, ulo ndi mmadu, na ulo ndi obia, ebe ndi nlere anya nke oma na ndi mmadu. . Otu esi eme ka asọmpi nke ụlọ oriri na ọ ofụ independentụ nweere onwe ya bụkwa ihe kwesịrị ịrịba ama ugbu a, ọtụtụ ụdị yinye na-ebute ụzọ "otu", iji nyere otu ụlọ nkwari akụ ndị ọbịa aka ịnwale "oge oyi". Ọganihu ngwa ngwa nke ụlọ obibi ndị obibi na-enyekwa nhọrọ ndị ọzọ maka mgbanwe nke ụlọ nkwari akụ ndị nwere onwe ha. Investmentlọ nkwari akụ ụlọ oriri na ọ investmentụ andụ ma sonye na ihe ngosi ahụ ga-eme ka ohere ịzụ ahịa ndị ọzọ na ụlọ ọrụ nkwari akụ nwee ohere.
Ihe ngosi a ga-aga n'ihu na-akwalite ụdị ụlọ nkwari akụ dị elu
Ihe ngosi a ga-aga n'ihu na-akwalite ụdị ụlọ nkwari akụ dị elu, na maka ụlọ nkwari akụ, ụdị iji kpọọ ike franchisees. Ulo oru ntinye ego na ndi nwe ulo oru ndi okacha amara, imepụta ulo oru nkwari akụ nke ulo oru na ulo ahia.
1. International na anụ ụlọ elu-ọgwụgwụ yinye hotels
2. International na anụ ụlọ n'etiti-nso nkwari akụ n'agbụ
3. International na anụ ụlọ mmefu ego hotel nkwanye
4. Ebe njegharị, ebe ezumike
5. Ulo mgbazinye ogologo na nke obere; Nslọ obibi na ebe obibi; Utilọ nkwari akụ;
Ego; 6. institutionslọ ọrụ mmadụ;
7. OTA ikpo okwu;
8. consultlọ ọrụ na-ahụ maka ịgba izu
Ihe ngosi ihe ngosi:
1. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu ga-eru mita 80,000, na-adọta karịa ụlọ ọrụ 1,000 na-ekere òkè na ihe karịrị ndị ọkachamara 50,000 na-azụ ahịa.
2. Mpaghara ngosi isiokwu dị iche iche, na-egosipụta ntụzịaka ọhụụ nke ị nweta nkwari akụ: dịka mkpa ị nweta nke ndị na-azụ ụlọ na nke ndị si mba ọzọ, ihe ngosi a haziri atụmatụ ebe ngosi isiokwu dị iche iche, na-elekwasị anya na ngwaahịa nchekwa nchekwa dị elu, sistemụ ụlọ nkwari akụ smart, na ịkpụcha ihe nlele. N'otu oge ahụ, kpọọ ndị isi ụlọ ọrụ ka ha nyochaa teknụzụ na ngwaahịa dị mma ma duzie usoro ịzụta.
3. Gosiputa njikọta ahia iji mepụta ihe omume kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ: site na ọtụtụ afọ nke mkpokọta na mgbasa ozi nke ozi ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ, onye na-ahazi ga-ezigara ndị ọbịa dị elu 150,000 na ndị ọbịa karịrị 300 otu akwụkwọ ịkpọ oku, yabụ na ndị na-ekpughe ihe ngosi nwere ike ịme mkparịta ụka n'otu n'otu na otu ụlọ nkwari akụ ma ghọta mkpa nke otu ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ahụ.
Tags: Ulo oriri na nkwari akụ, Franchise nkwari akụ
Muhammad Waqas Asheaf Afọ 1 ọnwa 5
Intrested maka ihe omume
Ndewo m abanyela na njem ahụ, biko kerịta nkọwa nke ndị ngosi
Barry shokrani Afọ 1 ọnwa 11
Ga-amasị m inyocha ohere nke ịbụ onye franchised site na otu nke n'elu ụdị.
Biko zitere m ndepụta nke ndị gosipụtara ya.